नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २७ वैशाख | बैशाख २७, २०७५
बुधबार नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । नेप्से ओरालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी अएको छ । बजार खुलेको केही समयपछि ओरालो लागेको नेप्से, कारोबारको एक घन्टा अवधिमा यस दिनको न्यून बिन्दु १ हजार ३ सय ५२ मा पुगेको थियो ।
त्यसपछि उकालो लागेको नेप्से अन्तिम समयमा पुनः ओरालो लागेर बन्द भएको छ । अघिल्लो दिन १५ अंक बढेर १ हजार ३ सय ६१ बिन्दुमा बन्द भएको बजार यस दिन ४ दशलमव ८७ अंक घटेर १ हजार ३ सय ५६ दशमलव १५ बिन्दुमा पुगेको छ ।
बजार घटेपछि लगानीकर्ता सेयर खरिद गर्न थालेपछि मध्याह्नतिर सम्हालिएको थियो । तर, बढेको मौकामा नाफा सुरक्षित गर्न थालेपछि नेप्से पुनः ओरालो लागेको एक ब्रोकरले बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको पहिलो क्यापिटल एक्स्पोले लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको छ । धितोपत्र बजारसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी र सेवा भएको सो एक्स्पोमा लगानीकर्ता गएपछि यस दिन बजार प्रभावित भएको हो ।
नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ५४ दशमलव ८९ स्केलमा पुगेको छ । बजार घटेपनि आरएसआई न्युट्रल जोनमा रहनुले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ ।
यस दिन १ सय ६० कम्पनीको ५ हजार ६ सय ३४ पटकको कारोबारमा रू. ३४ करोड ७ लाख ३४ हजार ३ सय ८९ बराबरको ६ लाख ५४ हजार २ सय २४ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
यस दिनको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा ३२ दशमलव ७३ प्रतिशत कम हो । लगानीकर्ताको सम्पत्ति अघिल्लो दिनको तुलनामा रु. ५ अर्ब ७१ करोड घटेर रु. १५ खर्ब ९१ अर्बमा सीमित भएको छ ।
‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन १ दशलमव शून्य २ अंक घटेर २ सय ८६ दशमलव शून्य ७ बिन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स अगाडि रहेको छ भने सेयर संख्याका आधारमा एनएमबी बैंक अगाडि रहेको छ । फरवार्डको यस दिन रु. २ करोड १४ लाखबराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ भने एनएमबीको ३५ हजार ८ सय ३७ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
कारोबार संख्याका आधारमा भने बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (७ सय ३ पटक) अगाडि रहेको छ । यस दिन लगानीकर्ताले ४ प्रतिशतभन्दा बढी कमाउन सकेनन् । सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडको सेयरमूल्य यस दिन करिब ७ प्रतिशत घटेको छ  ।
कारोबारमा आएका १ सय ६० कम्पनीमध्ये ३७ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने ९७ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी २७ कम्पनीको सेयरमूल्य भने यस दिन स्थिर रहेको छ ।
अन्य समूहको परिसूचकबाहेक यस दिन कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ । सो समूहको परिसूचक यस दिन शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत बढेको छ । होटेल समूहको परिसूचक यस दिन शून्य दशमलव ६ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यसैगरी, विकास बैंक समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक समूहको शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत, बिमा समूहको शून्य दशलमव २६ प्रतिशत र उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव १९ प्रतिशत घटेको छ ।